Madaxweyne Siciid Deni oo si rasmi ah xilka ula wareegay | Goojacade
Home War Madaxweyne Siciid Deni oo si rasmi ah xilka ula wareegay
Madaxweyne Siciid Deni oo si rasmi ah xilka ula wareegay
Madaxwaynaha cusub ee Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Isniin ah si rasmi ah xilka ugala wareegay Madaxwaynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Munaasabad kooban oo lagu qabtay Madaxtooyada Puntland, ayay Madaxweyne Saciid Deni iyo Madaxweyne ku-xigeenka cusub Axmed Karaash xilka ugala wareegeen Gaas iyo Camey, oo maanta faarujiyay qasriga Madaxtooyadda.
Madaxweyne Deni oo la doortay 8-dii bishan ayaa lagu wadaa inuu dhawaan magacaabo Xukuumad cusub, isagoo balan qaadey inuu la imaan doono wax-qabad muuqda, isagoo shacabka reer Puntland ka dalabaday inay la shaqeeyaan.
Gaas oo mudo shan sano ah xafiiska joogey, ayaa u tartamay markale inuu Puntland sii hogaamiyo, waxaana uu ku haray wareegga kowaad doorashaddii 8-dii January, oo codad aad u yar ka helay, isagoo aan usoo gudbin wareegga labaad.
Mudadii uu Gaas talada Puntland hayay ayaa lagu xasuustaa musuq-maasuq, in Xukuumaddiisa ku guuldareysatay bixinta mushahaarka ciidanka iyo la dagaalanka kooxaha argagaxisada.
Previous articleMadaxweyne Deni oo wareegto ku joojiyey cashuur dhaafkii hay’addaha Caalamiga ah iyo kuwa gaar loo leeyahay
Next articleBaarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey xeerka Agaasinka Bankiga Dhexe ee dalka